Shirka golaha wadatashiga oo furmay xilli la raali geliyey Guudlaawe | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Shirka golaha wadatashiga oo furmay xilli la raali geliyey Guudlaawe
Shirka golaha wadatashiga oo furmay xilli la raali geliyey Guudlaawe
Shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, kadib markii la qanciyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo shalay qaadacay shirka.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamad Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in shirkan, oo uu oo uu guddoominayo ra’iisul wasaaraha looga hadlayo dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo waxyaabihii ka hirgalay heshiiskii 27-kii bishii Shanaad eeMay ee hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku sheegay inaanu ka qeyb geli doonin shirka wada-tashiga qaran ka dib markii uu sheegay inaan lagala tashin, sidoo kalena wixii kasoo baxa aysan quseyn.
Qoraalka xafiiska xafiiska Rooble ayaa lagu yiri “Ra’iisul Wasaare Maxamad Xuseen rooble oo telefoonka kula hadlay madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe ayaa ka raalli galiyay tabashadii uu ka qabay ka qeyb galka Shirka Golaha Wadatashiga.”
Guudlaawe ayaa maalmihii dhowaa ku sugnaa dalka Turkiga, ayaa shirka maanta furmay uga qeyb-galaya aaladda muuqaal aragga fog ee Zoom.
Next articleWasiirka arrimaha gudaha oo kormeer ku tagay xarunta waaxda socdaalka dalka